Ihe kpatara ndị na-ere ahịa ji abanye Infographics | Martech Zone
Tuesday, July 10, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Anyị ekenyela ọtụtụ infographics na Martech na mepụtara ọtụtụ nke anyị infographics maka blog, ndị na-akwado ya na ndị ahịa anyị ndị ọzọ. Nke a infographic site na ịrụ ọrụ metụrụ na ihe mere inbound ahịa ụlọ ọrụ jiri ahuhu infographic… gụnyere na ha na-vasatail, linkworthy, na controllable.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile. Ka anyị na-emepe emepe infographics anyị na-ọ bụghị naanị na-achọ iwu linkbait. Anyị na-achọpụta na ọ kachasị mma iji nweta ihe omuma ihe mgbe ha kwụsịrị usoro ma ọ bụ isiokwu dị mgbagwoju anya. Ime nke a na eserese na-adịkarị mfe karịa ide ya na ogologo post ma ọ bụ na akwụkwọ ọcha. Ndị folks na-akọrọ ha ngwa ngwa n'ihi ha achọghị ịkọwa isi okwu, ma! Na nkenke, ha bara uru ọdịnaya dị mfe ịkọrọ ndị na-ege gị ntị. Nke ahụ bụ ihe ahịa ọdịnaya gbasara!
Ma mgbe ị nweta njikọ dị oke mma, anyị anaghị achọ ya mgbe niile mgbe anyị na-ekesa ha. Anyị na-agbakwunye oku ime ihe na ụfọdụ akara aha iji mee ka okporo ụzọ ahụ laghachi na weebụsaịtị nke ndị ahịa. Ma ọ na-arụ ọrụ!
Tags: inbound marketinginfographicuru infographicarụmọrụ
Rypple: Nzaghachi, Nkuzi na Nghọta
Jul 20, 2012 na 1: 28 AM
M ga-enyerịrị oge iji mepụta infographic, ahụrụ m ha n'anya.